0.1 "嘿杰里，恩丁盖塔（Ningaita sei mari）yekugadzira mabhuku sauri?"
0.2 Mienzaniso yehupenyu hwechokwadi Heano mamwe emisasa yangu yevaeni munguva yakapfuura. 3 zvinhu zvaunogona kuita iye zvino kuti uvandudze博客yako Kuburitsa maitiro kuwedzera mikana yekubudirira Kuramba muhutano hwekubatana：Nhungamiro yevatanga 2.众包岗位
0.3 4.辛迪加博客文章kune dzimwe nzvimbo dzakakurumbira
1 kuita mari mazano：3 nzira dzakachenjera dzekuita mari yako博客
1.1 想法＃1-Nyora uye俄语电子书
1.2 Heano maitiro aunotevera kuti unyore电子书：
1.3 想法＃2：Kukurudzira michina yakabatana mumamiriro akasiyana-siyana
1.4 想法3：Shandisa basa bhodhi
2 TL; DR /总结
"嘿杰里，恩丁盖塔（Ningaita sei mari）yekugadzira mabhuku sauri?"
Vamwe vanoda ku tanga博客uye kuita rumwe rutivi rupiro rupiro muIndaneti。瓦姆韦（Vamwe），库蒂（kati vasiye）nzira dzese dzekutengesa kushanda，假名kuwedzera bhizinesi ravo paIndaneti，假名kusiya basa ravo 9至5，内兹维姆韦.
Zvechokwadi ndinoda kubatsira avo vandinoziva kuti vanoita izvi。 Asi，Ndinokwanisa kugovana zvakanyanya panguva yekusangana-munhu kana Whatsapp kana Facebook Messenger.
Nokudaro，ndiri kunyora nyaya iyi yakareba kuti ndigovere zvidzidzo zvandakadzidza semuongorori mumakore ekupedzisira e15.
3 zvinhu zvaunogona kuita iye zvino kuti uvandudze博客yako
Kuramba muhutano hwekubatana：Nhungamiro yevatanga
恩达卡托拉（uye ndakaona vamwe vakawanda vachiwana）zvimwe zvibereko zvakanaka kuburikidza neshinga iri。 Ichi mapoka evanhu vari kutengesa Triberr kuti ini ichangobva kunetseka kuti ndive ndakapinza mune zvinyorwa zve1,000 munguva pfupi.
Heano maitiro mashomanana echirongwa wandakaita面板Facebook munguva ichangopfuura.
4.辛迪加博客文章kune dzimwe nzvimbo dzakakurumbira
Kurudzira bhaibheri rako kune nzvimbo dzinobatanidza vamwe’zvakagadzirwa; kuzvikurudzira，kukumbira，chiokomuhomwe，kana kushungurudza（zvakanaka，ndiri kutora）mupepeti kuti agamuchire bhaibheri rako rinopa zvokudya.
Iva nechokwadi chekuti zvitsva zvako zvitsva zvinodzokera kumashoko ako ekare kutora mumugwagwa。 WHSR博客inobatanidzwa kune dzakawanda dzemasayiti anozivikanwa anosanganisira社交媒体Nhasi uye Bhizinesi 2社区.
Ita shamwari nyowani dzeblogger在线yye kusimudzira mabloggi emumwe neumwe。 Ini handifarire zvikuru kutaura nevatorwa（nokutendeseka ini ndakashata nezvazvo）.
WebSummit 2014 kuDublin kwakaita kuti ndiwane chiitiko chitsva，uye ndinofanira kubvumirana kuti inzira inobatsira yekukurudzira网志，Zvisinei，kushanya kwandakanga ndaenda kuWebSummit 2014.
Siya mazano anovaka pamusoro pevamwe’博客（musaita垃圾邮件！）。 Nyora nenzira inoita kuti vanhu vade kuziva zvakawanda pamusoro pako.
Kutanga，Miller Miller阿纳达达·阿纳恩达·穆恩·伊桑·桑达古佐·阿奇帕·毛内罗·akasiyana-siyana anoenderana nechokutanga chekutanga uye achiita kuti vaverengi vazive nezvake uye kufanirwa kwake kune musoro。 Nokugovana zvaanoziva iye，anoratidza unyanzvi hwake pachedu yekutsvaga，achiwana ruzivo rwangu uye achinditora kuti ndidzidze zvakawanda pamusoro pake … zvakanyanya zvokuti ndakatarisa paMo Moz个人资料uye zvino.
Tsvaga mazano akakodzera mu niche yako（Google kutsvaga "关键词" + inurl：论坛），zvinyorwa zvinobatsira zvinyorwa /明杜罗，kukurudzira nzvimbo yako paine zvinyorwa zvisungo kana kurasa zvikwereti mumasangano ako，asi kana chete zvakakodzera.
Nharaunda yemagariro eGoogle + yakafanana zvakakosha semusangano-chinhu chinoita kuti kubudirire ndechokupa zvakawanda zvizhinji zvemashoko anokosha kuvanhu vemunharaunda mukutsinhana kwevatevergi vezvevateerts huhusihu vehupf.
Munhu为anoda免费赠品。 Mushure mevose vasingadi kuwana chimwe chinhu nokuda kwekusununguka?
Zvisinei，cherechedza mupfungwa kuti havasi vose vakasununguka vakanaka pachavo。 Iwe unofanirwa kupa chimwe chinhu窗格zvaunoda kuitira kuti iwe upe vanhu chikonzero chekutaura uye kugovera bhurogi rako mumagariro evanhu。尤卡·冯格瓦（Yuuka pfungwa）yose yeiyi pamusoro.
Bhizinesi rangu rebhizimisi paWeb虚拟主机揭秘（WHSR）iri kukurudzira kushandira mazano。 Google SERP yakawanda，ndakawana zviri nani kutarisa网页设计师vanogona kunge vachishandisa mazano angu ekugamuchira。 Kuti Ndigare Pachigaro Nevateereri Ivavo，ndakagadzira mitoro yekusununguka.
avo zvisikwa zvemasikirwo ehurukuro？是的-免费赠品inotarirwa kune vateereri vangu vakuru.
Mifananidzo yakasununguka zvirokwazvo yakagamuchira kunyanya kubva kune blogosphere，ichiunza vatenzi vatsva uye vateveri vevanhu。 Kana Iwe Unofarira，Izvi zviri zvishomanana zveblogi izvo zvichitaura maharabi.
Vazhinji mablogiki vanoshamisika kuti mitemo yekuvimba nayo inouya pakusimudza mari yavo。 Vakomana paGavhuna Hacker vakarangana mari pamwe neboka remetrics uye hapana chakaswedera pedyo nevateveri ve Twitter.
Kana iwe内田田久久里mari yako，tarisa kuungana nevanhu kuvanhu vehupfumi uye ugovaita nehuwandu hwako。 Ndiyo pfuti yako yakanakisa pakuvandudza pasi yako pasi!
Kukura vateveri vako veTra & 交通
Mazano mashomanana anokurumidza mukukura vateveri vako uye kutungamirira motokari kubva ku Twitter：
经常发推文。 Kuti uite kuti vateveri vako vadzoke uye vakanise pa tweet yako，iwe unofanira kutanga kuonekwa pa Twitter。 Kuti ndiite izvi ndinoshandisa purogiramu inonzi yainzi Dzoserai Old Post uye kupedza 20-25 maminitsi zuva rimwe nerimwe paComm.it kuti tibatane nevateveri vangu ve Twitter.
Gadzirai chokwadi nevateveri venyu。 Mharidzo yega yega iri 100x zviri nani kupfuura kuparadza mazana emakakatani emashoko.
Iva Nehupenzi-Taura Kune Vamwe Tweets，Taurirana hurukuro dzakakurumbira，uye tweet inofambisa标签.
kuita mari mazano：3 nzira dzakachenjera dzekuita mari yako博客
库克斯维拉帕诺，IWE Wakadzidza –
Nzira Yekuwana Niche inobatsira sei，于耶
Nzira yekuwana nzira yakananga ku博客yako.
Iye Zvino Inguva Yekupedzisira Kwechivara Chedu-Maiitiro Ekubhadhara vatenzi vako bhulogi.
Muchikamu chino，ndichafunga nezvevatatu nzira chaiyo yekuita mari yako yebhugigi mumugwagwa kwenguva refu.
Izvozvo zvakati，yeuka mupfungwa kuti窗格nzira dzakawandisa dzokuita mari paIndaneti。 Kana iwe ukatarisa kuchinyorwa cha Ashley Faulkes，chaakafukidza zvinopfuura 100个在线商业创意； iwe uchaona kuti博客ingori chikamu cheiyo mufananidzo mukuru。 ndeiyi的Mibvunzo yekuzvibvunza iwe：
Chii chaungaita kuti uite mari nokukurumidza（shandura basa rako）
电子书inopa tani yezvibatsiro：
Kuti uzvigadzire，zvose zvaunoda zivo iwe watova nazvo
Kubhadhara电子书kuumba simba rako seyanzvi
Iwe unogona kuzvitengesa pazvikwata zvakawanda（kufanana Amazon uye Payhip）
Nyanzvi dzakawanda dzakatanga kuzviitira zita ne电子书。 Remit Sethi，Muvambi我们Ini Ndichakudzidzisa Iwe Kuti Uve Wakapfuma uye mumwe wevanonyanya kuzivikanwa mubhizinesi rekuInternet，akatengeswa bhuku rake rokutanga nokuti $ 4.95.
Bhuku rekutanga raRamit – "2007 Nongedzera kuKicker屁股".
Bhuku iyo eitungamirira kune是《纽约时报》的畅销书uye 14 michina yakasiyana-siyana yepamuyamisi yakaita kuti ave munhu akapfuma kwazvo-zvose zvakakwana pa.
Heano maitiro aunotevera kuti unyore电子书：
Sarudza musoro。 Nyora nezve chimwe chinhu icho vateereri vako vanoda kudzidza，asi vasingagoni kudzidziswa mune imwechete博客博客。 Vazhinji vari kuda kubhadhara kune imwe-kumira-shopu yeruzivo urwu.
Ita sarudzo。 Izvi zvichabatsira kuronga pfungwa dzako sezvaunonyora.
Vimba nguva zuva rega rega kunyora。 Usave munhu anotanga电子书uye haambozvipedza。 Vimba kunze kweawa zuva rega rega，maawa maviri，15 maminetsi-hazvina basa kuti akareba sei。 Ingozvinyora.
Tumira kune imwe maona电子书e模板。 Heano zvishoma kubva HubSpot.
Gadzira Chivako（kureva。Canva）kana kubhadhara自由职业者kuti aite（一名自由职业设计师，费用约为$ 26 / awa nguva dzose maererano neongororo yangu yekubhadhara）
Photoshop yako封面3D电子书图像。 Pat Flynn akaisa pamwe a Video huru pamusoro pekuita izvi.
瓦佩扎！ Zvino kukurudzira kune zviri pamoyo wako.
想法＃2：Kukurudzira michina yakabatana mumamiriro akasiyana-siyana
Kana iwe uri kutokurukura uye kukurudzira michina uye mabasa kune vateereri vako，wadii kuita mari kubva kuvanhu vamunotaura?
Izvo hazvibhadhare vaverengi vako chero chinhu，uye iwe unowana komisheni chero mumwe wavo anotenga chigadzirwa.
Kushamwaridzana kwekutengeserana kunogona kuva chinhu chikuru chekuwana mari shoma shoma。 Tarisa aya mazano ekubatanidza kutengeserana kwakabatana mumari yako：
Kutanga，enda nezvinyorwa zvawakamboburitsa uye tsvaga zvigadzirwa kana masevhisi awakataura。假名uchinge wawana，ingoenda kune yega webhusaiti uye tsvaga peji re "瓦卡巴塔纳".
Zvadaro tevera mirayiridzo yekuti uve wehukama。 Kana uchinge wava mumwe，iwe kazhinji unowanzoona ID yekutsvaga nzvimbo panzvimbo yekupedzisira ye URL imwe neimwe.
Apo mushanyi achinyanya pa URL iyoyo neAID yako uye atenga chigadzirwa，iwe uchawana mari.
2-Tsvaga mikana muMitambo / Mishandira Yaunoshandisa
Ita rondedzero yezvose zvigadzirwa uye basa raunoshandisa。 Ndinoshandisa yakawanda purogiramu yepaIndaneti ine chokuita nebhizimisi rangu。 Izvi zvinogona kuva mikana mikuru yekubatana mari.
Enda kune webhusaiti yechigadzirwa chega chega uye ona kana vane peji yekubatana。娜娜（Sana Chirongwa）.
Sezvo usinawo zvemukati zveizvi，uchafanira kugadzira zvimwe.
Tora pasi kuti unoshandisa sei chigadzirwa kana basa。 Inobatsira这里kurongedza basa rako？ Inokubatsira ne SEO在这里？ Inokubatsira kuti usvike kune vane simba vanoblogi?
Gadzira Chidzidzo che博客chinodzidzisa vateereri vako kuti vabudirire sei mitsva yakafanana vachishandisa icho chigadzirwa kana basa.
Kurudzira iyo mharidzo kune vateereri vako，pamagariro evanhu，uye huro hupi hwepa，Indaneti huzere nevanhu vanogona kutsvaga mhinduro iyoyo.
Unak kushandisa chimwe chigadzirwa asi使用akwanise？假名uchigona kuita kuti mari yako idzokere munguva pfupi?
Kana Chigadzirwa Chacho Chine Chirongwa Chekubatana，伊兹维ndezvechokwadi.
库塔加，伊塔rondedzero yemichero / maitirwo aunoda kushandisa。 Zvino Enda Kune网站uye ona kana vane sangano rekubatana.
卡娜·瓦卡达罗（Kana vakadaro） Zvadaro shandisa，ita chidzidzo chekudzidza / kudzidzisa，uye kukurudzira mharidzo kune vateereri vako sezvawaiita kare.
Iyi mishonga inogona kugara yakashanda kwenguva yakareba，ichikupa mari yekutora kwehupenyu hwezvinyorwa zvose.
4- Kukurudzira michina yakabatana mune imwe电子邮件电子邮件回复响应
电子邮件chinhu chine simba kushambadzira chishandiso。 Ndiyo imwe yemashoma mashoma ayo vanhu vanoongorora zuva nezuva uye vari vanoda kuendeswa kune.
电子邮件自动回复inofanirwa kutenderera kwemaimeri inotumirwa kuvanhu apo inyoresa kune yako电子邮件列表.
Heano maviri angu maidiwa aidiwa：
Zvose izvi zvinokubvumira kuti uise一个自动回复器.
Kungofanana nekusimudzira michina yekubatana pabhogi yako，kukurudzira zvinhu izvi mu email autoresponder zvinogona kuunza mari yekusarudzira iwe.
Iwe unogona kana kuvasimudzira zvakananga mumaemail kana kugadzira博客文章教程uye kusimudzira izvo。无论哪种方式，窗格mukana wekuti mari muhomwe.
Hezvino zvandiri kukurudzira neako自动回复：
Kutanga maemail ako mashoma ekutanga ane zvinhu zvinobatsira zvisingatenge chero chinhu。 Izvi zvinokubatsira kutanga kuvimba nevanyorero vatsva.
Fwanya muhukama hwekuvaka mazano，kufanana nekukumbira vanyori vako kana iwe uchigona kuvabatsira nezvose。 Izvi zvichavakawo kuvimba uye kuderedza kusabvumirana.
Paunenge uchisimudzira chigadzirwa，塔里萨窗格izvo zvavanogona kuwana uye kwete pachigadzirwa回声。 Kana iwe wakawana mhinduro uchishandisa，ita shuwa kutsanangura izvo zvakadzama。 Izvi zvichaita kutengeswa kwako.
想法3：Shandisa basa bhodhi
Mapurisa eJobho anofanana nevanotsvaka basa nevashandi。 Vanogona kupa nguva yakazara gigs，nguva yenguva，kana basa rechibvumirano.
Semuyenzaniso，problogger职位委员会inobatanidza博客nemakambani anotarisa kuti akwanise munhu kuti aumbe zvigadziro kwavari.
Kana iwe uine chiremera munzvimbo yako uye uchifananidza vanotsvaga basa nevashandirwi，unogona kutora bhodhi rebasa uye kuita mari nguva imwe neimwe kana mushandirwi achida kutumira kuvhurwa kwebasa.
TL; DR /总结
Kana Iwe uchikwanisa kubvisa zvitatu chete zvinokosha kubva munyaya ino：
本死我不知道kuita mararamiro kuburikidza nekubhugama。 Vamwe Vema-博客作者makuru vanowana pedo kusvika kumatanhatu matanhatu pamwedzi nguva dzose.
Nzira dzakanakisisa dzekuita mari yebhugi yako：Kutangaidza，kubatana kwekutengesa，kutengesa zvigadzirwa nemishandiro.
Nhamba yehupenyu hwehu博客yakakosha。 Asi kutanga kutora mari，bhulogi yako inodawo kuva niche inobatsira uye kuwana zvakakwana zvinotarirwa nemugwagwa.
Ndakagovana vanopfuura gumi nevaviri vanoita mari kubhadhara mazano，mazano，uye pfungwa mune iyi positi。 Ndinenge ndakanyanya kufara kana izvi zvinokurudzira vamwe venyu kuti vatore danho rinotevera uye kutanga kutora mabhigi enyu uchishandisa nzira dzakataurwa.
Heino Imwe yekupedzisira yeuchidzo ndisati ndapedza iyi发布：Zvizhinji zvinobva chiito.
Vakawanda vakauya kwandiri munguva yakapfuura vaiva nezvinhu zvakakwana（unyanzvi，ruzivo，nguva）kutanga bhuku uye kuita mari。 Asi vakakundikana-nekuti vaivewo nezvikonzero zvekumedzisa zvirongwa zvavo uye kumirira kuti nyeredzi dzienderane.
Ndinogona kukuratidzai nzira uye kubvisa zvipingamupinyi zvishoma munzira。库蒂·乌布迪里雷，衣阿华·库卡姆巴·穆格瓦格瓦·我·帕查科.